apple inoshandura kukosha kwemidziyo inoshandiswa mukutengesa-ins
Kuru Nhau & Ongororo Apple inoshandura kukosha kwemidziyo inoshandiswa mukutengesa-ins
Apple inoshandura kukosha kwemidziyo inoshandiswa mukutengesa-ins
Kana iwe uchiwanzo kutengesa mune yako isina kushandiswa Apple mudziyo wekurerutsa kutengwa kweiyo nyowani, ungangoda kuteerera kune izvo zvatiri kuzokuudza. Pakupera kwesvondo rapfuura, Apple yakagadzirisa kukosha-kwekukosha kwezvimwe zvigadzirwa kumusoro uku uchidzikisa kukosha kwevamwe. Semuenzaniso, kana iwe & apos; tichitsvaga kutenga iyo nyowani iPad nekutengesa mune yechinyakare modhi kuchengetedza imwe mari, isu tine dzimwe nhau dzakanaka kwauri. Apple yawedzera huwandu hwakanyanya hwePad trade-ins. Semuenzaniso, iyo iPad Pro yave kukosha kunge inoita $ 525 mukutengesa, kubva pamadhora mazana mashanu.
Apple inomutsa kukoshesa kwemimwe michina inogona kushandiswa mukutengesa kune kutenga mhando nyowani
Mimwe michina iri kuwana bump mukutengesa mukukoshesa inosanganisira iyo iPad Mhepo (kubva pa $ 210 kusvika pa $ 250), iyo iPad (ikozvino $ 240, kubva pamadhora mazana maviri), uye iyo mini mini iyo yave kuita madhora makumi maviri nemashanu mukutengeserana ichienzaniswa neiyo yapfuura $ 175. Iwe zvakare uchazviwana iwe uchiita zvirinani zvirinani uchishandisa iyo Apple Watch yekutengesa-mukati. Iyo Series 4 nguva yekuona zvino inokupa mamwe gumi emadhora mukutengesa (kubva pamadhora zana nemakumi mana kusvika kumadhora zana nemakumi masere) sezvichazoita iyo Series 3 (kubva pamadhora 85 kusvika $ 95) Uye kushandisa iyo Apple Watch Series 1 kuenda pakutenga chigadzirwa cheApple kunotora madhora makumi matatu nemashanu pamutengo, kubva pamadhora makumi matatu.
Apple inoshandura kutengesa-mukukoshesa kwemamwe emidziyo yayo
Zvimwe zvigadzirwa kubva kuApple zvakarasa zvimwe zvekutengeserana-kukosha. Kutengesa muMacBook Pro kuchakuchengetera mari inosvika madhora chiuru nemazana mashanu nemakumi mashanu kuenda kuchitenga chitsva, pasi kubva pamadhora 1,760. MacBook Air ine mutengo-wekutengeserana wemadhora mazana matanhatu nemakumi matatu uchienzaniswa ne $ 730 kare. Kutengesa muMacBook? Iwe unofanirwa kutarisira $ 70 kushoma mukutengesa (kusvika kumadhora mazana matatu nemakumi masere kubva pamadhora mazana mana nemakumi mashanu). Iyo iMac Pro ikozvino ine yekutengeserana-kukosha kubva kuApple ye $ 3,040 kubva $ 3,580. Kuderera kwekutengeserana-kukosha ikozvino iko kuri pamutemo kweMac ($ 1,180 kubva $ 1,390) uye iyo Mac Mini ($ 830 kubva $ 930). Iyo MacPro yaona kuwedzera kukuru mukutengesa kukosha kusvika pamadhora mazana maviri nemazana mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe kubva pamadhora mazana mana nemazana mana nemakumi mana asi kuwedzerwa uku kunogona kungoitika nekuda kweApple ichisarudza kugamuchira mamwe mamodheru ekupedzisira ekutengesa.
Apple yakagadziridzawo kukosha-kwekukosha kwainoisa pane mamwe madivaysi eApple. Iyo Samsung Galaxy S20 ikozvino ichaunza inosvika madhora mazana maviri nemakumi mashanu neshanu kuenda kutengesi, ichibva pamadhora mazana maviri nemakumi manomwe. Kune rimwe divi, mitengo inogamuchirwa yeGPS S10 + uye Galaxy S10 iri kuenda kumusoro pamwe nekutengeserana-kukosha kwePixel modhi. Semuenzaniso, kutengesa chero iyo Pixel 2 nePixel 2 XL kuchakuchengetera mari inosvika madhora makumi mana pakutengwa kweApple kifaa senge iPhone.
Kana zviri zvekutengesa zvinosanganisira zvekare iPhone mamodheru, iyo iPhone 11 Pro Max, 2019 & apos; s epamusoro-e-iyo-modhi modhi, ine yekutengesa-mukukoshesa inosvika kumadhora mazana mashanu. Iyo iPhone 11 Pro inogona kukusevha ingangoita $ 450, uye iyo iPhone 11 inogona kukupa iwe yakawanda seUS $ 350 muchikwereti kana ikashandiswa mukutengesa.
Kunze kweiyo chaiyo modhi iri kushandiswa mukutengesa, mamiriro echigadzirwa zvakare anosarudza kukosha. Pane zvakawanda kukwenya here? Girazi raputswa here? Chishandiso chinoshanda zvakakwana here? Iyo bhatiri ichiri kubhadharisa? Mhinduro dzemibvunzo iyi dzinoenda kure kure kuona kuti imarii iyo Apple inokukweretesa iwe kuchinhu chitsva.
Unogona kuwana inofungidzirwa yekutengesa-kukosha kweApple zvishandiso uye zvimwe zvigadzirwa zveApple nekushanyira Apple & apos; s online chitoro . Sekutaura kwaApple, 'Tengesa mudziyo wako unokodzera kutenga kiredhiti kune yako inotevera kutenga, kana kuwana Apple Chipo Kadhi iwe yaunogona kushandisa chero nguva. Kana chishandiso chako chisina kukodzera kuwana kiredhiti, tichachigadzirisa zvekare mahara. Zvisinei nemhando kana chimiro, tinogona kuchichinja chive chinhu chakanakira iwe uye chakanakira nyika. '
droid maxx sd kadhi slot nzvimbo
renyeredzi tarisa verizon zuva rekuburitsa
lg runhare rwakanaka
Hezvino & maapos zvekuita kana bhatani remagetsi pafoni yako yeApple rikatyoka
Maitiro ekuona iro zita rezita remufananidzo kana vhidhiyo pane iPhone
Maitiro ekutora skrini pane iyo Samsung Galaxy Note 8
90Hz vs 60Hz kuratidza: vanhu vanonyatso kuona musiyano here?
Software Yekuvandudza Hupenyu Hupenyu - SDLC
Hapana ziviso mwenje pafoni yako? Iyi Anwendung ndiko kuponeswa kwako
Akanakisa makesi akasimba eGoogle Pixel 2 uye iyo Pixel 2 XL: Dzivirira izvo & apos; vadikani
Ichi chakavanzika chePixel chimiro chepamusoro kopi-uye-kunama
Vanoverengeka vatengi veRobinhood vakarasikirwa nemari yavo yese, asi kwete kubva kumatengesi akashata